Wiricheya Cushion AEGIS® Inoratidzirwa Anti Bhakitiriya - Karman Healthcare
×	 ERGO NDEGE-TP 18	1 × $870.00
View ngoro "ERGO FLIGHT-TP 18" yakawedzerwa kungoro yako.
Chigaro uye Rudzi rwekumashure *
Orange Emola inongowanikwa muhukuru hwegumi nematanhatu nesendimita gumi nemasere
Sarudza chisarudzo ... Gireyi Orange Emola Pepuru
Sarudza chisarudzo ... 16 ″ x17 ″ 18 ″ x17 ″ 20 ″ x17 ″
hapana 100 Series 300 Series
Anti Bacterial Makushoni huwandu
SKU: 810058400499 Categories: Back & Cushion, Kudzoka Makushoni, Cushion Inovhara, furo, Memory Foam, chigaro, Mawiricheya Makushoni, Wiricheya Zvishongedzo, Wiricheya Upholstery & Zvigaro
hwiricheya Cushion Ye S-ERGO 100 kana 300 Series
Wana zvakanakisisa hwiricheya pamutsai wako ERGO. Kunyangwe iwe uine yakajairwa hwiricheya, Ergo modhi kana 100/300 akateedzana hwiricheya, iwe unogona kuwana iyo S-ERGO kutsiva kana kuchangobva kushambadzira pane yako hwiricheya. IAegis yakarapwa anti-microbial seating system ine yakawanda ye zvinobatsira.
Iyo Aegis Inobata Anti-hutachiona hwiricheya Cushion yakakwana kune vanhu vane hunyoro rutsigiro uye yekumisikidza zvido. Iyo yakagadzirirwa kupa yakawedzera nyaradzo nerutsigiro kushandisa muchina unogona kuwachika uye kufema zvinhu zvinowedzera kusimba kwefuro. Iyo inobatsira zvikuru kune avo vanokwanisa kuita yavo yega huremu hwekuchinja kuitira kumanikidzwa kuzorora.hy shandisa Aegis hwiricheya Kushivheni?
Iyo Aegis Inobata Anti-hutachiona hwiricheya Cushion yakakwana kune vanhu vane hunyoro rutsigiro uye yekumisikidza zvido. Iyo yakagadzirirwa kupa yakawedzera nyaradzo nerutsigiro kushandisa muchina unogona kuwachika uye kufema zvinhu zvinowedzera kusimba kwefuro. Iyo inobatsira zvikuru kune avo vanokwanisa kuita yavo yega huremu hwekuchinja kuitira kumanikidzwa kuzorora.
Sei uchishandisa Aegis hwiricheya Kushivheni?
Velcro Kwete-kutsvedza pazasi uye kumashure
Yakapfava polyurethane foam
Inofema, inodzivirira mvura mesh jira
Zviri nyore kubatika uye zvinobviswa
AGEIS inorapwa hwiricheya cushion
Dhizaini dhizaini uye ruvara
Inoisa Makushoni eS-105, 106, 115, 115-TP, 125. S-305
Mazhinji S-ERGO Series Ultralight Mawiricheya uya zvakajairika ne AEIGIS® kubata anti-microbial yakavharwa zvigaro sisitimu ayo ari nyore kubvisa uye akanamatira kune hwiricheya by velcro. Mimwe mitsara yeS-ERGO inopa yakavakirwa muhurongwa iyo ingangoda kuti mutyairi wemagetsi abvise zviri nyore kuti igezwe. Uyu 1/2 ″ mutiro unogara pane yakawanda-nhanho ye microfiber inoputirana furo ine yakakwenenzverwa yekumisikidza kuona refu inoregedza yakatsiga cushion.
Iyi anti bhakitiriya hwiricheya Cushion inobvumidza yepamusoro yekufema kubvumira mweya kupinda mukati meS-Shape Seating system kuwedzera nyaradzo kumushandisi. Mhepo yakagadzirirwa kutendera iwo anotyaira masimba ekupisa uye humidity kuti iparadzwe mune ambient tembiricha. Kuyedza kwedu kusimudzira izvi tichipokana neanogona mabhakitiriya anovaka nekupfekedza chigaro chechigaro nacho AEIGIS® inoita iyi sarudzo yakanakisa. Ndiyo musanganiswa wakakwana uye unoenderana ne hwiricheya pasina chinodikanwa chegobvu hwiricheya pamutsago. Verenga zvakawanda pamusoro S-Rakaumbwa zvigaro kuti uone mutambo wakakwana pamusoro pekuti nei iri iri sarudzo yedu yemakusheni evose S-ERGO's.
USUB - Kutsiva hwiricheya kusheni UPC #
18 × 20 × 4 mukati
Wiricheya Tsoka tsoka & Inotsiva Zvikamu
Kurumidza Kuburitsa Mavhiri
CU-ERGO-KUDZOKA Kudzoka Ndangariro Yekuputa